Booliska Puntland ee gobolka Mudug oo wiil looga shakiyay arimo amni daro ku wareejiyay Galmudug. – Radio Daljir
Booliska Puntland ee gobolka Mudug oo wiil looga shakiyay arimo amni daro ku wareejiyay Galmudug.
Gaalkacyo,Jan 1 -Ciidamada booliska iyo maamulka gobolka Mudug ee dowladda Puntland ayaa munaasabad maanta si wadajir ah ay ugu qabteen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ay booliska maamulka Galmudug ee ka howlagala koonfurta magaalada Gaalkacyo ku wareejiyeen wiil dhalinyaro ah oo ay ciidamada booliska ee Puntland ku xireen magaalada Gaalkacyo,kadib markii looga shakiyay inuu qorsheeynayay falal amni daro inuu ka gaysto magaalada Gaalkacyo.
Wiilka oo lagu magacaabo Cabdifitaax Cabdi Bare 21-sano jir ah ayaa waxaa laga xiray agagaarka saldhiga ciidamada booliska Puntland ee magaalada Gaalkacyo,waxaana siidayntiisu ay ka dambeysay kadib markii lagu waayay wax dambi ah inuu gaysanayay.
Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac ”Tigey”oo ka hadlay munaasabadii booliska Galmudug loogu wareejinayay wiilkaasi dhalinyarada ah ayaa waxaa uu cadeeyay inaysan jirin afduub lagu haysto wiilkaasi.
“Magaalada horay waxaa uga dhacday fal wuxuushnimo ah oo wiil dhalinyaro ah lagu afduubtay,dad sheegaya in wiilkaasi uu kii la mid yahay waxaan sheegaynaa waxaasi inaysan ahayn wax jirta,wax haba yaraatee xad gudub ah oo lagu sameeyay aysan jirin,in tuhun lagu qabtay la baaray sharciga la mariyay kadibna la ogaaday inuusan wax dambi uusan lahayn”ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Maxamed Yuusuf “Tigey”,waxaa dhinaca kale uu kacodsaday booliska Galmudug inay maamulkiisa kala shaqeeyaan sugida nabadgalyada,ayna soo qabtaan cidii amni daro ka gaysata waqooyiga Gaalkacyo ee u baxsata dhinaca koonfureed ee Gaalkacyo.
Gaashaanle Cabdi Xasan Qoorey oo ah taliyaha qaybta booliska ee maamulka Galmudug ayaa dhankiisa balanqaaday inay ciidamada Puntland kala qayb qaadan doonaan sugida amniga magaalada Gaalkacyo,waxaana uu intaasi raaciyay inuu la wareegay wiilka maxbuuska ahaa oo ay maamulka gobolka Mudug ee dowladda Puntland kusoo wareejiyeen.
Wadashaqaynta dhinaca amaanka ee u dhaxaysa maamulada Puntland iyo Galmudug ee magaalada Gaalkacyo ayaa lagu tilmaamaa inuu aad u hooseeyo,waxaana ay taasi keentay in falal amaan daro oo aan cidna loo soo qaban inay ka dhacaan magaalada Gaalkacyo.